जीवनशैली Archives - Page 41 of 50 - Purbeli News
गर्मीमा पसिना गन्हाउँछ ? यस्तो छ सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय
के तपाई पनि गर्मीमा आउने पसिना गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? पसिनाकै कारण कसैको अगाडि जान हिच्कीचाउनु हुन्छ ? चिन्ता नगर्नुस्, यस्तो समस्याबाट सजिलै छुट्कारा पाउन र ताजा महसुस गराउन विभिन्न उपायहरु अपनाउनुस् । पुरुषको लागी उपाय नुहाइसकेपछि कागतीको रस, तथा अन्य फुलको रसबाट बनेको पर्फ्युम प्रयोग गर्नुहोस् । यसले शरिरमा सुगन्ध छाउने छ । एकदमै कडा ब...
यी ३ राशिका पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा ‘बेस्ट हजबेन्ड’
आफ्नो लागि राम्रो जीवनसाथी छान्नु सायद संसारमै सबैभन्दा कठिन काम होला । तर, यहाँ महिलाका लागि भने राशिले जीवनसाथी छान्न कही सहज बनाएको छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार यी तीन राशि बताउँदै छौ, जुन राशिका पुरुष ‘बेस्ट हजबेन्ड’ अर्थात् राम्रो, असल श्रीमान भनिन्छन् । मकर राशि – यस राशिका श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई सँधै सन्तुष्ट राख्ने गर्छन् । श्रीमतीलाई ख...
तामाको नाम सुन्ने वित्तिकै धेरेको मुखमा मिठो पानी आउने गर्छ, तामाको अचार तर तरकारीले धेरैको मन लोभ्याएको हुन्छ । तर तामालाई धेरै परिकारको रुपमा कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा लगभग धेरै गृहिणीहरूलाई थाहा छ । यसको ताजा टुसाबाहेक बोत्तलमा अचारको रूपमा राखेर धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।हामीले प्राचीन कालदेखि सब्जीको रूपमा खाँदै आएको तामा त साइल...
म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरो विवाह १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला मेरा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो। माया(प्रेम के हो थाहा थिएन। बहकाउमा आएर गाउँकै विवाहित पुरुषसँग हेलमेल भयो र माया(प्रीति बस्यो। उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि मलाई गलत गरें भन्ने लाग्यो अनि त्यो घरमा बस्नु उचित लागेन। मैले आफ्नो घर छाडें र सम्बन्ध-विच्छेद गरे।जोस...
यी ५ किसिमका जोडी, तपाइकाे कस्ताे
विवाह गर्नु एकलबाट द्वयेत जीवनमा प्रवेश गर्नु हो। विवाह भएपछि एकले अर्कोको कुरा सुन्नु पर्छ, आपसी कुरा बुझ्नु पर्छ, एकले अर्कोको लागि त्याग गर्नुपर्छ। तर सबै जोडीहरु भनेजस्ता हुदैनन्। विवाहको प्रकृती, पृष्ठभुमी र परिस्थितिले फरक-फरक किसिमका जोडी निर्धारण गर्छ। नेपालमा देखिएका र भोगिएका केही जोडीहरुको चर्चा गरिएको छ। सुविधाभोगी जोडी : यो जोडी...
जो कोही पनि उपहार पाएमा खुशी हुन्छौ । तर, के कहिल्यै सोच्नु भएको छ, उपहार दिनेवालाको नियत कस्तो छ भन्ने ? किनकी उपहार दिनेको नियतमा खराबी छ भने तपाईको खुशीमा ग्रहण लाग्न सक्छ । त्यसैले, यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ, कस्ता–कस्ता उपहार लिनु उचित र कस्ता लिनु अनुचित हुन्छ ? जान्नुहोस्, वास्तुशास्त्र अनुसार कुन–कुन चिज उपहारको रुपमा नलिने । ...
जस्तोसुकै डढेको छालालाइ ३ मिनेटमा गोरो बनाउने घरेलु उपाय
गर्मी मौसमको समयमा स्विमिङ पुल, सामुद्रिक किनार, पिकनिक र अन्य बाह्य गतिबिधिमा जान मन पराउँछन् । तर, योसँगै घाममा डढ्ने समस्या पनि आउँछ । घाममा ड्ढ्नबाट बच्न वा डढिसकेको छालालाई जोगाउन निम्न उपाय अप्नाउन सकिन्छ : – छालालाई चिसो र शान्त बनाउन दिनमा दुई पटक चिसो पानीले नुहाउनुहोस् । यसले डढिसकेको छालाको दाग हटाउँछ । – घामले डढेर छाला राता भएको ...
महिलालाई बुझ्न कठिन मात्र होइन असम्भव नै छ । कैयौं यस्ता कुरा हुन्छ जुन कुरा महिलाले मनमै राखेर पचाइदिन्छन् । अझ त्यसमाथि महिलाले पतिसँग केही कुरा कहिल्यै पनि भन्दैनन् । यी ६ कुरा पत्नीले पतिसँग भुलेर पनि पतिसँग भन्दैनन्ः १- महिलाहरु आफ्नो मिल्ने साथीलाई पतिको यौन कला र क्षमताबारे सबैकुरा भन्छन् । तर यस्तो कुरा शेयर गरेको भन्ने बारेमा पतिसँग...
बिहान सबेरै उठ्नाले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । दिनभर कामको व्यस्तता तथा थकानको कारण हामीलाई चाँडै निद्रा लाग्छ र बिहान ढिलासम्म निद्रा खुल्दैन । बिहान ढिलासम्म सुत्नाले हाम्रो शरिर आलस्य हुनुका साथै तनाव बढ्ने हुन्छ । र हामी चाहेर पनि बिहान चाँडो उठ्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेक दिन यी टिप्स अपनाउनुस्, जसले बिहान चाँडै उठ्नमा मद्दत गर्नेछ । १. ...
निन्द्रामा समस्या छ ? वास्तुमा ध्यान दिनुस्, यस्ता छन् ७ टिप्स
यदि तपाईलाई निन्द्रामा समस्या छ भने एकपटक वास्तुतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । वास्तु दोषको कारण निन्द्रा डिस्टर्व हुने गर्दछ । घरको वास्तुले हाम्रो दैनिक जिवनमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । हामीले सामान्यतया यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्ने गर्छौ र समस्याको समाधानका लागी अरु तिरै भौतारिने गर्छौ । थाहा पाउनुस् वास्तुशास्त्रले निद्रामा कस्तो असर गर्छ । ...